www.camaloow.com - News: Dowladda Ingiriiska oo ka warbixisay Ajandayaasha ugu waaweyn Shirka London..........................
June 25 2018 11:46:48
Dowladda Ingiriiska oo ka warbixisay Ajandayaasha ugu waaweyn Shirka London..........................
<?php </a> Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska Theresa May oo Marti galineysa Shirka London ee looga hadlayo Arrimaha Soomaaliya ayaa soo bandhigtay Ajandayaasha ugu Muhiimsan ee shirkaasi.
Waxa ay sheegtay in shirkaan oo si wada jir u wada shir guddoomin doonaan Ra’iisul Wasaaraha UK , Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Gutters uu yahay mid lagu baadi goobayo Taageero deg deg ah oo loo fidiyo Soomaaliya si loo horumariyo Dhaqaalaha iyo Siyaasadda Soomaaliya.
Sidoo kale waxa ay shaaca ka qaaday Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska in lagu soo qaadi doono shirka London la dagaalanka Argagixisada Sooamaliya iyo si Soomaaliya ay uga hir gasho Nabad gelyo la isku halleyn karo ka hor 2020 oo dowladda hadda waqtigeeda uu ku egyahay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ingiriiska ayaa dhinaceeda shaaca ka qaaday kadib Bayaan ay soo saartay in Ururka Caalamiga ah iyo Dowladda Soomaaliya ay heshiisyo cusub ku wada saxiixan doonaan si looga mira dhaliyo in Soomaaliya ay yeelato dowlad Nabad gelyo buuxo leh islamarkaana Wax sii saar horumarineed leh.
Beesha Caalamka ayaa Soomaaliya siineyso taageero ku aadan Fududeynta doorashooyinka, Dib u eegista Dastuurka , Kobaca Dhaqaale iyo ka hortagga Musuqmaasuqa.
Arrimaha ugu Muhiimsan ee Ajandayaasha Shirka London qeyb ka ah waxaa ka mid ah Taageerida Qaxootiga Soomaaliyed eek ala firirsan Caalamka, kaalmada Caalamka ee Abaaraha Soomaaliya gudaheeda 2012kii ayey ahayd markii Shir nuucaan oo kala ah ay dowladda Ingiriiska u qabatay Soomaaliya.
· xassan on May 10 2017 · 0 Comments · 56928 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 26,365,716 unique visits